> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site Nokia N97
Ọ ga-agbake ehichapụ faịlụ site Nokia N97?
Mmadụ na mberede ehichapụ faịlụ site na gị Nokia N97? Biko atụla na a isi jijiji. Ọ na-kpam kpam posso naghachi ehichapụ foto, video na ọdịyo si Nokia N97 igwe.
N'ihi gịnị? Mgbe ọ na-abịa smart igwe, n'ebe ndị na-emekarị ebe nchekwa kaadị n'ime, na-eji na-echekwa gị mgbasa ozi faịlụ dị ka music, foto na vidiyo. Mgbe ị na-ihichapụ faịlụ, na ebe na kaadị ebe nchekwa na-echekwara ndị faịlụ na-akara dị ka oghere na maka ọhụrụ faịlụ, na-ehichapụ faịlụ na-apụghị ịhụ anya. Ọ bụrụ na ị meghi ọhụrụ faịlụ na, ị nwere ike mfe naghachi ndị ehichapụ faịlụ site na kaadị ebe nchekwa na gị Nokia N97.
Olee otú naghachi ehichapụ foto & vidiyo si na Nokia N97
Iji weghachite ehichapụ faịlụ site Nokia N97, ị chọrọ iji nweta a Nokia N79 mgbake ngwá ọrụ tupu eme ihe ọ bụla ọzọ. Ịhọrọ a pụrụ ịdabere na omume dị nnọọ mkpa, n'ihi na ụfọdụ unreliable ndị nwere ike imebi gị furu efu faịlụ na-eme ka ha unrecoverable. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ezi echiche ama, na-agbalị Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac? Ma nke ha n'ụzọ zuru ezu na-akwado mgbake nke photos, video na ọdịyo faịlụ site Nokia N97, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha na-efu ruru nhichapụ, format ma ọ bụ n'ụzọ inaccessibility. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole iji weghachite niile furu efu faịlụ na 3 nzọụkwụ.
Gbalịa free ikpe mbipute a Nokia N97 mgbake software ugbu a.
Step1. Ẹkedori Nokia N97 mgbake omume
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume na kọmputa gị, ẹkedori ya ugbu a, ị ga-enweta ndị interface dị ka ndị na. Pịa "Malite" button na-amalite Nokia N97 faịlụ mgbake. Ka ọ dịgodị, eme ka n'aka gị Nokia N97 ekwentị e ọma jikọọ na kọmputa.
Step2. Iṅomi gị Nokia N97 maka furu efu faịlụ
Ebe a gị Nokia N97-egosi dị ka a mbanye akwụkwọ ozi. Họrọ ya na-amalite ịchọ furu efu faịlụ gị Nokia N97 ekwentị site na ịpị "iṅomi" bọtịnụ.
Step3. Preview na-agbake foto & vidiyo si na Nokia N97
Ikpeazụ nzọụkwụ ugbu a. Ịnwere ike ihuchalu niile foto na ego ndị faịlụ na ị chọrọ na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Nokia N97 ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Olee otú Igosi MicroNet Data Recovery